MetroNews - Home कल सेन्टरका कर्मचारी र सम्पर्क अधिकारीलाई तालिम
कल सेन्टरका कर्मचारी र सम्पर्क अधिकारीलाई तालिम
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कल सेन्टर
काठमाडौँ । कल सेन्टर (गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ) लाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभागले कर्मचारी र सम्पर्क अधिकारीका लागि तालिम सुरु गरेको छ । तालिममा गुनासो सुन्ने कर्मचारीले अपनाउनु पर्ने सावधानी, उसमा हुनु पर्ने धैर्यता, गुनासोकर्ताले भनेका कुरा टिपोट गर्ने तथा सफ्टवेयर इन्ट्री गर्ने, गुनासो सम्बन्धित अधिकारीलाई पठाउने तरिका सेन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई सिकाइँदैछ । यसैगरी सम्पर्क अधिकारीलाई गुनासो हेर्ने, सुन्ने तथा काम भएपछि समापन टिप्पणी (क्लोजिङ् स्टेटमेन्ट) विवरण लेख्ने तरिका सिकाइँदैछ ।
सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘सेन्टर सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गर्दैछौँ । यसले काम गर्ने तरिका र नतिजामापन गर्न सजिलो हुनेछ । यससँगै भएका जनशक्तिलाई तालिम दिने, आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति र उपकरण थप गर्ने योजनामा छौँ । अहिले रेकर्ड भएका गुनासाको सुनुवाई कहाँ पुग्यो? थाहा पाउनका लागि ट्र्याकिङ् सिस्टम बढाउने काम गर्दैछौँ ।’
महानगरका सहायक निर्देशक भरतकुमार पोखरेलकाअनुसार अहिलेसम्ममा सेन्टरमा बस्ने ५ जना कर्मचारी र विभागबाट तोकिनुभएका १० जना सम्पर्क अधिकारीलाई सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिम दिइसकिएको छ । सम्पर्क अधिकारीका लागि १५ वटा वडाबाट नाम आइसकेको छ । सबै नाम प्राप्त भएपछि उहाँहरुलाई पनि प्रविधिका बारेका तालिम दिइनेछ ।
महानगरपालिकाले जेठ २४ गतेदेखि कल सेन्टर (गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र) सञ्चालनमा ल्याएको हो । सहायक निर्देश पोखरेलकाअनुसार त्यसयता आजसम्ममा ३ हजार ३ सय गुनासा तथा सुझाव आएका छन् । यीमध्ये ६ सय कलमा गुनासो तथा सुझाव के हो? राखिएको छैन । फोन आएको छ तर किन गरिएको हो? खुलेको छैन ।
कल सेन्टरमा गुनासो रेकर्ड हुने तरिका
कल सेन्टरमा कसैले टेलिफोन गरेपछि अपरेटरले फोन रिसिभ गर्छन् । उनीहरुले कुराकानी गर्दा फोन नं., ठेगाना, गुनासो वा सोधपुछको विवरण सोध्छन । यसरी सोधिएका विवरणसँगै फोन गरेको समय, भौगोलिक नक्साजस्ता विवरण सफ्टवेयरमा भर्छन् । त्यसपछि गुनासोसँग सम्बन्धित विभागको सम्पर्क अधिकारीलाई इमेलमा गुनासो पठाउँछन् । यसरी पठाइएको विवरणमा गुनासोकर्तासँग कल सेन्टरका अपरेटरले गरेको कुराकानीको अडियो, गुनासोसँग सम्बन्धित ठाउँको भौगोलिक नक्सा पनि समावेश हुन्छ । यही विवरण महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हेर्न सक्ने बनाइएको छ ।
महानगरको सेवा, महानगरका वडा, विभाग, आयोजना तथा एकाईसँग सम्बन्धित सोधपुछ तथा गुनासा, महानगरीय सेवा तथा सुविधा वितरणसँग सम्बन्धित काम तथा महानगरसँग भएका अपेक्षा सम्बन्धि गुनासा तथा सोधखोजका लागि यो प्रणाली स्थापना गरिएको हो । यस प्रणालीमा एकै पटक १५ जनाको गुनासो सुन्न सकिन्छ । अहिले यो सेवा कार्यालय समयमा मात्र प्रदान गरिएको छ । त्यसपछि फोन गर्ने व्यक्तिले प्राप्त निर्देशनअनुसार ५ अङ्क थिचेपछि रेकर्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो रेकर्ड भोलिपल्ट केन्द्रका कर्मचारीले सुनेर सम्बोधन गर्नेछन् ।